Waa yaabee xagee ayey xukumaan madaxda maamul goboleedyada? - Caasimada Online
Home Maqaalo Waa yaabee xagee ayey xukumaan madaxda maamul goboleedyada?
Waa yaabee xagee ayey xukumaan madaxda maamul goboleedyada?
Inta aanan u Guda gelin Qoraalkeyga ku saabsan Xaaladda Siyaasada ee Soomaaliya Xilgaan waxaan marka hore waxaan Tacsi u dirayaa Dhamaan Dadkii Dhibaatada ka soo gaartey Qaraxii Zoobe waxaan ilaah uga baryey kuwii ku dhintey in Ilaah u Naxariisto, kuwa ku Dhaawacmey iyana Ilaah ha Caafiyo, waxaa Xaqiiqo ah in Qaraxaasi uu Ummada Soomaaliyeed uu Mideeyey waxaana ka garan kartaa sida ay isugu Gumadeen uguna Banaanbaxeen Dhibaatadaas intaa ka dib.
Waxaa maalmahaan waxaa Hadalko aan u daneyneyn ummada Soomaaliyeed ka soo yeerayey Madaxda Maamlulada balse hadda Bulshada Soomaaliyeed u yaqaanaan Hogaamiye Kooxeedyada Maamulada kuwaa oo la dhihi kari waa kuwa la doonayo in lagu Burburiyo Dowladnimada Soomaaliya .
Markaan Dib u akhriyey Qoraalkii 21 Bishaan ay soo saareen Hogaamiyayaashaas waxay ay salka ku haysaa in aysan rabin Hogaamiyayaashaas Dawladnimo ka hana qaada Guud ahaan Dalka Soomaaliya Sidoo kale Qoraalkaas waa mid abuuri kara in dalkaan dib loogu celiyo Dagaaladii Sokeeye ee laga soo Gudbey ee aan ka dhaxalney Dowlad la’aan iyo Burburka
Qoraalkaas ay soo saareen Hogaamiyaasha Maamulada waa mid ku soo beegmey Xilli ummada Soomaaliyeed ay la Xanuunsanayaan Diiftii iyo Darxumadii laga dhaxley Qaraxii lagu Hoobtey ee ka dhacay isgoyska Soobe marka waa Qoraalka aan ka Tarjumeyn Maslaxda Ummada Soomaaliyeed waana mid laga dhandhansan karo danahooda gaarka ah
Waxa yiraahdeen Hogaamiyayaashaas Dowlada Federaalka Soomaaliya waxay Xukuntaa Magaalada Muqdisho waa yaabee iyaga Xagey Xukumaan oo uu Maamulkooda uu gaarsiisan yahay, markii ay Dhawaan isugu tageen Magaalada Kismaayo Shariif Xasan waxaa uu yiri “ Cabdi Cali Gaas adiga Dhulkaa martaa anagana Diyaarad baan ku tagnaa Deegaanadeena” marka arrintaan waxay kuu Cadeyneysaa in MaamulkoOda uu yahay mid Kooban oo ku eg Magaalooyinka ay hada Joogaan
Cabdi weli Cali Gaas maamulka aad maanta Hor Boodeysaa waa Beer lagu Faley oo laguu diyaariey marka Maanta in ay Hadaladaas kaa soo yeeraan lagaama Fileyn , waxaana tahay Qof wax ka yaqaana Dowladnimada Soomaaliya marka waxaan ku leeyahay noqo mid ka shaqeeya Maslaxada Ummadda Soomaaliyeed
Ugu Dambeyntii Waxaan leeyahaya Ummadda Soomaaliyeed Meel kasta oo ay joogto Qabiil meel waav na gaarsiin waayey oo aan ka dhaxalney Bubur Dib u dhac, waxaa Keliya ee Maanta na deeqa waa Dowladnimo oo aan ku gaari karnaa Horumar iyo Midnimo
W/Q Cali Axmed Cabdulle